PressReader - Ilanga: 2018-11-01 - Abepolitiki yibo abadala izinkinga kwiSABC
Abepolitiki yibo abadala izinkinga kwiSABC
UKUDILIZWA kwezisebenzi ngesinye sezehlakalo ezinzima nezidala ingcindezi enkulu empilweni yalabo abathintekayo. Kuleli lakithi, lapho imisebenzi ivele iyindlala – ngokwezibalo zakamuva ezikhishwe yiStatistics SA, bangaphezulu kwezigidi ezine abantu abakulungele ukusebenza, kodwa abangawutholi umsebenzi – mancane amathuba okuba labo abadilizwayo baphinde bawuthole umsebenzi.
Yingalesi sizathu isinqumo seSouth African Broadcasting Corporation (SABC) sokuhlongoza ukudiliza izisebenzi ezibalelwa ngaphezu kuka-2000, ngenxa yokuba sobishini lokuswela imali, sethusa. Abaphathi bale nhlangano bakhala ngokuthi ingxenye ecishe ibe ngamaphesenti awu-50 emali engenayo, isetshenziswa ukuholela izisebenzi, okuyisimo esesiyifake otakwini lokuba sezikweletini.
I-SABC isize yayokhangeza kuhulumeni, icela usizo lwemali ukuze ikwazi ukuqhubeka nokwenza umsebenzi wayo.
Njengoba bekuvele kulindelekile, izinyunyana namaqembu epolitiki sebesihlabile lesi siphakamiso sokudilizwa kwezisebenzi. Ukuphikisa lesi siphakamiso okwenziwa yizinyunyana yinto vele ebilindelekile ukwenzeka ngoba phela umsebenzi wazo wukuvikela amalungu azo.
Amaqembu epolitiki wona kakufanele agxambukele ekulawuleni ukusebenza kwebhodi nabaphathi beSABC, okuyibona abakuqondayo okwenzeka kule nhlangano. Yikho kanye ukugxambukela kosopolitiki ezindabeni zale nhlangano okudale lezi zinkinga ezikhona; kuzokhumbuleka ukuthi ongqongqoshe ababengamele ukusebenza kwale nhlangano phambilini, baphoqa ukuqashwa kwezikhulu ezithile ezazingawufundele umsebenzi, njengoMnu Hlaudi Motsoeneng nje.
Le nsizwa yakwaMotsoeneng, eyabe ingenaso ngisho isitifiketi sikamatikuletsheni, yagcina ixoshiwe kwaSABC, kodwa seyone kakhulu izinhlelo njengoba kubikwa ukuthi phakathi kokunye yazikhuphulela yona iholo ngezigidi zamarandi, yabuye yenza okufanayo nakobhululu bayo abasebenza kule nhlangano.
Naphezu kwezikhalazo eziphikisana nokuhlelwe ngabaphathi, kubukeka sengathi iSABC izophoqeleka ukudiliza ngenxa yesimo esibi semali. Ngokubona kwethu, kuzofanele izembe lingagawuli nje kuphela ezisebenzini izisemazingeni aphansi, kodwa nasezikhulwini imbala.
Kakuyona imfihlo ukuthi izikhulu zale nhlangano ziyikha ngamahalavu imali, ngakho kufanele kubuyekezwe imihlomulo yazo ukunciphisa izindleko. Mayelana nekusasa lale nhlangano, kubalulekile ukuba iqembu elibusayo, i-ANC, lipheze ukuyisebenzisa njengethuluzi lokusabalalisa izinhloso zalo zombusazwe - ikakhulukazi ngezikhathi zokhetho - ukuzuza amavoti.
Ukusetshenziswa njengethuluzi lemfundiso-ze yiqembu eliphethe, yikhona kanye okudala ukuba izakhamizi zingayethembi le nhlangano, okwenza ukuba ilahlekelwe ngabalaleli nababukeli, futhi ilahlekelwe yizikhangiso ezingenisa imali.